On May 12, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Mazuvano vazhinji vedu tsika kwakungotaura chete asi vanhu havachakoshese kuti mukadzi watsano ndiambuya.
Ndaigara kuZambia nemukadzi wangu nevana vedu 2, one morning ndakanzwa mukadzi wangu achiti hanzvadzi yake yafona ichiti mukadzi wake arikuuya kuZambia for a couple of days and she wanted pekurara.Ndakangoti its fine ko ndaiswera ndisipo ndirikubasa plus there was no problem to have visitors. Inini ndaizama kuti ndiite tsika and avoid kugara muroom mumwe chete saka ndadzoka kubasa mukadzi wangu ainge adati asvika kumba and had to start cooking, but chakandivhutsa ndichingopinda mumba ndakawana mukadzi watsano achibva kunogeza achimhanya kuspare bedroom kwevana magaro ese aripanze, akacheuka akazviona kuti ndamuona.
Paakazobuda akawana ndatova kukitchen ndichiisa nyama pamoto since mukadzi wangu ainge abatwa netraffic and she was going to be late. Pakauya mukadzi watsano kukitchen she was just saying sori sori hamdina kuziva kuti mauya, ndichibva ndangoti it’s okay musazvinetse henyu. Tsano vangu munhu ainge ari way successful but problem aiyisa basa pamberi kupfuura mukadzi wake and the sister vaigara vakataura kuti muroora wake was complaing kuto haasi kumbonyatsosvira, somehow tete vemusikana had leaked this information but yainge iri mistake vachitaura nyaya.
Pakazosvika mukadzi wangu ndainge ndatova almost done kubika and she took over vachiita nyaya nemukadzi watsano inini ndokubva ndayenda hangu kunogara mubedroom mangu. Ndakapihwa chikafu ndikadya ndokubva ndakurumidza kurara, ndakamuka pakati pehusiku ndichiyenda kubathroom ndiye dhuma naambuya mupassage apa vasina kana hembe vachibuda mubathroom ndikatanga kuzvibvunza kuti asi vanoroya or musikanzwa chete.Munhu akangobata mazamu kuvhara nemaoko so, ndakapinda mubathroom ndikadzokera kunorara, apa pfungwa dzainge dzakatoshaya zvekuita asi mboro yangu yakabva yamira zvinehasha ndichibva ndamutsa mukadzi wangu ndokumuzvambura nayo, akatoshaya kuti chii chaitika nekuti most of the time handimumutse manheru either makuseni, manheru tisati tarara or masikati kana ndakafarisa or tichiita zvemusikanzwa.
Ndakashaya kuti ndoudza mukadzi wangu sei nyaya yakadai saka inini naambuya takabva taita secret yedu. Chandaitya manje ndaiva off the next day apa ndainge ndakutya kuti kuita kwaambuya pamwe vaida kuzama kundiudza kuti vaiva nezemo. Ndakaswera ndakazvivharira kusvika kuma 10am ndikanzwa knock zvikanzi ndabika huyai munwe tea, ndakabuda ndikaona mukadzi watsano akapfeka kumatights twuya twunenge twekugym or twekumhanyisa apa beche rainge rakaita kudhinda patight zvekuti wainyatso ona kuti beche ravo rakafuta.Ndakatora plate yangu ndichibva ndayenda kunogara kubedroom kwangu coz iyi yainge yatova muyedzo, hanzi potsi harwirwi, piri asi tatu munhu anenge akuda kusvirwa pakadai. Ndakati ndichingopinda mubedroom ndakanzwa imwe knock zvikanzi ko murikunditizirei, ndikati aiwa ndati ndikupei nguva yekuzorora semunhu akawuya nezuro. Handina kuda kunyadzisa ndichibva ndayenda kunogara navo tichidya, munongozivawo kuti ziso kana ramboona chinhu rinoramba richidzokera ipapo. Saka ndaiti ndichinwa tea ziso raibva radongorera pakati pemakumbo ambuya vangu, kufuta kwainge kwakaita beche ravo ndaingoti ndikazvifunga chete ndobva ndanzwa mboro kusimuka.
Ndakaona kuti ndikaramba ndichiona izvi ndaizokundwa nemuyedzo saka ndakasimuka ndikanotora zambia yemukadzi wangu ndikavapa ndisina zvandataura, ndipo pavakati ahhh saka mandiona henyu murikuda kuvharirei. Ndanga ndichitoda kuti muone plus ndizive kuti mungandibatsirewo here ndatova nemwedzi mitatu apa ndakasvirwa ka 3 chete. Ndakaramba ndakavatarisa ndikaona kuti munhu haasi kana kumbonyara vaintonge vari serious, ndokubva vati kubva pandakakuonai nezuro beche rangu riri kungovhita vhita zvekuti handina kana kurara ndichifunga kuti pamwe ndingawane mukana nemi, tete ndakavaudza kuti hanzvadzi yavo haasi kundisvira vakafunga kuti ndiri kuseka. Please kani munongoisa musoro chete ndipedze shungu pamuri, ndakakurirwa nemuyedzo ndichibva ndati horaiti musoro chete.
Mukadzi watsano akabva asimuka ndokuuya pandainge ndakagara ndokubva ndaburitsa mboro achibva abatirira pasofa ndichibva ndangoti musoro so eish munhu ndokubva aipushira yese mukati zvikanzi musaburitse please mirai chete. Kununira kwainge kwakaita beche iroro nekudziya kwaiyita mukati ndakazongoona ndakukoira apa zvekubirira zvinonaka sei. Ndakakoira mukadzi watsano kusvikira atunda ka 3 inini ndisati.Ndakazoita rimwe zisimba nditanga kuita zvine speed ndokungoti tsssaaa ysssaaaa tsaaaaa , even nanhasi ambuya vanombotumira mamessage zvonzi ko haudi kuti tidzokorodze here zviya zvatakamboyita , this time ndakazo blocker number yavo pa Whatsapp yangu. Handidi kuputsa imba yangu , zvaindibata batat ndosaka ndati ndikuudzei zvakayita pamwe hana yangu ingareruke…
PREVIOUS POST Previous post: Kukwira kamurungu kamuZimba kandakajumha kuno Joni!
NEXT POST Next post: Kuyamura chimwe chimomz changa yanzwa nezemo, ndakainyikidza nyoro!